मनाङलाई हराउँदै आर्मी खप्तड गोल्डकपको फाइनलमा !! - nayakhoj24.com
मनाङलाई हराउँदै आर्मी खप्तड गोल्डकपको फाइनलमा !!
प्रकाशित मिती: January 13, 2018 | naya khoj पढ्न:0मिनेट
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – नेपाल आइस सुदूरपश्चिमाञ्चल खप्तड गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको पहिलो सेमिफाइनलमा त्रिभुवन आर्मीले मनाङ मर्स्याङदीलाई ३-१ ले हराएको छ ।
खेलको नवौं मिनेटमा मनाङले हेमन गुरुङद्वारा खेलमा अग्रता लिन सफल भयो । क्रसमा आएको बल आर्मीका गोलकिपर विकेश कुथुले राम्ररी क्लियर गर्न नसक्दा पेनाल्टी बक्समा रहेका हेमनले सो अवसरलाई सदुपयोग गरेका थिए ।
तर खेलको २३ औं मिनेटमा आर्मीका भरत खवासले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याउन सफल भएका थिए । खेलको ४२ औं मिनेटमा आर्मीका नवयुग श्रेष्ठले टोलीका लागि अग्रता लिने राम्रो मौका पनि खेर फालेका थिए । तर त्यसको ३ मिनेटपछि नवयुगले पाएको अर्को अवसर भने परिणत गर्दै आर्मीलाई खेलमा पहिलो पटक अग्रता दिलाए ।
खेलको ६१ औं मिनेटमा सुजल श्रेष्ठले पाएका राम्रो अवसर उनले खेर फालेका थिए । त्यस्तै ७७ औं मिनेटमा नवयुगले गोलकिपर दिनेश थापा मगरसँग ‘वान भर्सेस वान’ को मौका पनि गुमाएका थिए ।
त्यस्तै खेलको ८८ औं मिनेटमा सन्तोष तमाङले नवयुगको पासमा गोल गर्दै आर्मीको जित सुनिश्चित गरेका थिए । खेलका म्यान अफ द म्याच नवयुगले जितेका थिए । यस जितसँगै आर्मी फाइनलमा पुगेको छ र भोली हुने सुदुरपश्चिम र एपिएफको विजेतासँग फाइनलमा भिड्ने छ ।
धनगढी आउनु अघि आर्मीले मोफसलका ३ र मनाङले २ उपाधि जितिसकेका थिए । यी दुई टोलीले गत महिना ३ वटा नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल खेलिसकेका पनि थिए । जसमध्ये २ मा आर्मी र १ मा मनाङ विजयी भएका छन् । यी दुई टोलीबीच आजको भेट वर्षको चौथो भेट हो ।
क्वार्टरफाइनलमा अग्नी रुपन्देही ११ लाई ४–० ले हराएको २४ घन्टा भन्दा कम समयमा मनाङ सेमिफाइनलका लागि उत्रिएको हो । आर्मीले भने रुस्लान थ्री स्टार क्लबलाई २–१ ले हराएको दुई दिन पछि सेमिफाइनल खेल्दै हो ।
गत महिना सताक्षी गोल्ड कप र मेची नेत्रालय काकरभिट्टा गोल्ड कपमा मनाङलाई हराएको आर्मी दुहवी गोल्ड कपमा भने पराजित भएको थियो । त्यसअघि आर्मीले वैशाखमा वीरगन्जमा विशाल स्मृति र मनाङले भदौंमा जेसिज कपको उपाधि जितेका थिए । दुवहीपछि यी दुई टोलीबीच आजको भेट पहिलो थियो ।
खप्तड गोल्ड कपको विजेताले ११ लाख ११ हजार १ सय ११ र दोस्रो हुने टोलीले ५ लाख ५५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ ।
आर्सनलका प्रशिक्षक वेंगरको क्लब छाड्ने घोषणा
आईपीएल : दिल्ली डेयरडेभिल्सले भन्यो – सोमबारको खेलमा सन्दीपलाई खेलाउनै पर्छ
आईपीएल [अपडेट] पञ्जावले हैदरावादलाई हरायो, क्रिसगेलकाे शतकीय रन
आक्रमक ब्याटिङ गर्दै क्रिस गेलको पहिलो शतक
कास्की–११ लाई पराजित गर्दै उद्घाटन खेलमा आयोजक माइभ्याली विजयी
रोनाल्डोले आर्कषक गोल गरेर पनि भेट्टाउन सकेनन् मेस्सीलाई, मेस्सीको बार्सीलोनाले गर्यो कमाल